Jasmine : January 2013
တို့နှစ်ယောက် ရဲ့ ကံ
Posted by စံပယ်ချို | Monday, January 28, 2013
တရားကို နတ်စောင့်ပါ၏ ။
့ မျော်လင့်ချက်တွေ ပျောက်ဆုံးရခြင်း
Posted by စံပယ်ချို | Wednesday, January 23, 2013
မသေသင့်ပဲသေခဲ့ ရတယ် ။
၀ိညာဉ်တွေငိုသံ တချက် တချက်ကြားလိုက်မိတယ်
အရိုးအရင်းလေးတောင် ကိုက်ခွင့်မရတဲ့ ဘ၀တွေပေါ့
အမှုတစ်ရာက ဘ၀ထဲ ခဏခဏ ၀င်ရောက်လို့နေတယ်
အထောက်အပံ့ဆိုတာ ဘာမှ မရှိ
မေတ္တာတရား တွေ ရှားလာလို့
Posted by စံပယ်ချို | Saturday, January 19, 2013
အမှောင်ခန်း လေးထဲ ချောင်ထိုးခံနေရတဲ့ စိတ်
ငါနဲ့အတူ မူယာ မာယာများတဲ့
အရှိန်အဟုန် ပြင်းပြင်းနဲ့ထွက်ခွါသွားတဲ့ ဒီကျောပြင်ကို
ကြားလိုက်ရတဲ့ နားတွေကို အားနာမိလို့
လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ကြီး ဒီသံယောဇဉ်တွေကို
ချစ်ရသူ မရှိပဲ နွမ်းနွမ်းလျလျ
တခါမှ မတင်ဖူးသေးတော့လဲ အသစ်ပါပဲနော်
ဘာအတွက်မျှမဟုတ်ပါပဲ စိတ်ထဲရှိတာလေးကို ရေးခဲ့ဖူးတဲ့ကဗျာလေးပါ)
Posted by စံပယ်ချို | Monday, January 14, 2013
ချစ်ခြင်းတွေ တနေ့ထက် တနေ့များများလာလို့
သံယောဇဉ် ကလဲ တခါတရံ နားလည်မှု တွေလွှဲ
တိမ်မဲ တိမ်ညိုတွေ မကြာခဏ
Posted by စံပယ်ချို | Friday, January 11, 2013
မာနဆိုတဲ့ အသံ ကျယ်လောင်နေဆဲ
သဲထဲရေသွန် ဘာမှ အရာမထင်
လူမလေး ခွေးမခန့်တဲ့ ဘ၀
သိက္ခာတွေ အရိပ်ခိုတဲ့ နေ့များ
တစ္ဆေတွေ လမ်းပျောက်တဲ့ အချိန်များ
ငါ့ ဘ၀ မှာလဲ အသက်ရှုရတာ
ဟန်ဆောင်မှုတွေက ငါ့ ဘ၀ပေါ့
စစ်မှန်တဲ့ မေတ္တာကိုလဲ မရှာနိုင်ခဲ့
(လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်ခန့်က ခင်မင်ရသူတစ်ယောက်အတွက်ရေးသားပေးခဲ့တဲ့ကဗျာ)
Posted by စံပယ်ချို | Monday, January 7, 2013
ကွဲမယ့် ဆဲဆဲ နှလုံးသားအတွက်
အရောင် မရှိတဲ့ ချစ်ရသူမျက်လုံးရဲ့အောက်မှာ
တ်ိတ်တိတ်လေး ငါ ထွက်သွားပါရစေ
ဘ၀ဆိုတာ အချစ်မရှိရင် ပြည့်စုံမှု မရှိပါဘူးချစ်သူရယ်။
Posted by စံပယ်ချို | Thursday, January 3, 2013
2012 ကိုပြန်ကြည့်ခြင်းဆိုတဲ့ Tag Post ရေးပေးဖို့ တဂ်လာတဲ့ ပစ်ပစ် (Black Roze)
ဒုတိယကတော့ မောင်ဘုန်း (ကောင်းကင်ဖြူ)ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အရမ်းကိုနောက်ကျနေပါပြီလို့ အားနာစွာနဲ့ တောင်းပန်ပါရစေတော့နော်
ကျန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၂ကို ပြန်လှည့်လို့ ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ စိတ်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေထက် ၀မ်းနဲစရာ စိတ်ညစ်စရာတွေပိုများလို့နေတယ် သူများတွေတော့ ဂျက်မသိပါဘူးဂျက်ခံစားရတာကိုပြောပြတာပါ ကျန်းမာရေးဟာ ၂၀၁၂ မှာအတော်လေးဆိုးခဲ့ပါတယ် တနေ့ရွှေ တနေ့ငွေလို့လဲပြောလို့ရပါတယ်ကံကောင်းမှုလေးတွေကတော့ ဘုရားသခင်ပေးသလောက်လက်ခံရရှိခဲ့ရတယ်. ကံအကောင်းဆုံးကတော့ ခလေး၃ယောက်ရလိုက်ခြင်းပါပဲ ကိုလွင်ပြင်အကိုကြီးရဲ့ အမျိုးသမီးဆုံးပါးသွားရခြင်းကြောင့် အကိုဟာခလေး၃ယောက်နဲ့ကျန်နေရစ်ခဲ့ရပါတယ် ခုတော့ခလေးတွေက ကျွန်မရဲ့ ယောက်ခမများနဲ့တူတူနေထိုင်ပြီးကျောင်းတက်နေပါတယ် ၆တန်း-၅တန်း-၃တန်းအရွယ်လေးတွေပါ. စာလဲထူးချွန်စွာနဲ့ ၃ယောက်လုံးတော်ကြရှာတယ်.အဲတာကတော့ ၂၀၁၂ ဘုရားသခင်ပေးတဲ့အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ပါပဲ စိတ်မကောင်းစရာတွေကတော့အတော်လေးများခဲ့တယ် ဂျက်မေမေ ဆီးချိုရောဂါဖြစ်တယ် ဂျက်လဲဆေးရုံနဲ့ အိမ်သွားလိုက်ပြန်လိုက်နဲ့အတော်လေး ပင်ပန်းခဲ့ရတယ်နောက်တခုခံစားလိုက်ရတာ တနှစ်နဲ့တနှစ် ပြီးသွားတာအရမ်းမြန်နေသလားလို့ပါ. မြန်မြန်လေးကုန်သွားတာကိုလဲ သဘောကျတယ်ကိုယ်က ၂၀၁၂ ကိုနုတ်ဆက်သည်ဖြစ်စေ နုတ်မဆက်သည်ဖြစ်စေ သူကတော့နေခဲ့ရရှာပြီဒီလိုပါပဲ ၂၀၁၃ ကိုကြိုသည်ဖြစ်စေ မကြိုသည်ဖြစ်စေ သူကတော့ ရောက်လို့လာပါပြီ ကိုယ်မကြိုလို့ သူမလားဘူးရယ်မှ မဟုတ်တာနော် P ....
၂၀၁၃ စစခြင်းကိုကံမကောင်းတာလဲကြုံလိုက်ရတယ် နှစ်သစ်ကူး တညလုံးသွေးတွေတိုး အစာအိမ်ပြန်နာ၁-၁-၂၀၁၃ ပိတ်ရက် ဆေးခန်းတွေကလဲပိတ် ဆေးရုံထိလဲမသွားနိုင် ရှိတဲ့ဆေးလေးတွေနဲ့ ဖာထေးပြီးနေသာအောင်နေလိုက်ရတယ် နောက်ရက်တော့ဆေးရုံကိုတန်းပြေးရတာပါပဲ လူတိုင်းအားလုံး.....သက်ရှိများအားလုံး ကံကောင်းခြင်းတွေ ရရှိပါစေ. စိတ်တူ ကိုယ်တူ ချစ်ရသူတွေနဲ့ ထာဝရလက်တွဲနိုင်ပါစေ. ရည်မှန်းချက်တွေအောင်မြင်ကြပါစေ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများကိုလဲ ၂၀၁၂ အတွင်းဂျက်ဖက်က မသိ၍မှားသော အမှား သိရဲ့ မှားသောအမှား အမှားအားလုံးကိုခွင့်လွတ်ပါရန်တောင်းပန်ပါရစေ စာဖတ်သူများအားလုံးကိုအစဉ်လေးစားလျှက်
အချိန်လေးရတိုင်း နေထိုင်ကောင်းခဲ့ရင် ကဗျာလေးတွေဆက်တိုက်တင်နိုင်ပါစေလို့ (ကိုယ်တိုင်ဆုတောင်း)
(ပစ်ပစ်နဲ့ မောင်ဘုန်းရေ ရေးတော့ရေးလိုက်ပါပြီနော်
စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်မပါတော့ ကိုယ့်စာကိုယ် ဖတ်ရတာ အားမရှိဘူးဖြစ်နေတယ် ။)